Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro: BQ သည် Android One ကိုထပ်မံအသုံးပြုသည် Androidsis
BQ သည်စပိန်တံဆိပ်ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့အရည်အသွေးရှိသောဖုန်းများကြောင့်လူသိများသောယနေ့ခေတ်တွင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Android One bandwagon ကိုပထမဆုံးခုန်, သူတို့သည် 2015 ခုနှစ်တွင် Aquaris A4.5 စတင်သောအခါ။ အခုသူတို့ဟာဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးနဲ့အတူဒီစီမံကိန်းရဲ့တစိတ်တပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့ဖြစ်သည်.
အဲဒီဖုန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကစတင်မိတ်ဆက်ကတည်းက BQ သည် Android One နှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်၊ သူတို့ကငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသောထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်ခုကြောင့်ဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုခန့်မှန်းပြီးပြီဖြစ်သောဖုန်းနှစ်လုံး။
Aquarius X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို BQ မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်နှိုက်ကသူတို့ရဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့် အကွာအဝေးသစ်ထိပ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းများကိုပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီအတည်ပြုရန်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ပေမယ့်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မော်ဒယ်လ် ၂ ခုအနက်မှတစ်ခုကိုဖြန့်ချိပြီးသောအခါသင်မြင်နိုင်ပါသည် Aquaris X2 Pro သည်ဖန်သားကျောပါသောဒီဇိုင်းကိုပြသည်။ ဒါကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို iPhone X လိုဖုန်းတွေကလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်လည်းပြသနိုင်ခဲ့တယ် စက်၏ dual အခန်း၏တည်နေရာနှင့်ပုံသဏ္.ာန်။ နောက်ပြီးနောက်ကျောမှာလက်ဗွေဖတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။
BQ သည် Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့နှင့်အတူ frame လျှော့ထားသောလမ်းကြောင်းကိုပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 18:9ပုံစံဖြင့်ထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်မျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ စပိန်ကုမ္ပဏီသည်ဤကိစ်စနှင့် ပါတ်သက်၍ ဈေးကွက်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်နာရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ရှိဖုန်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အရာ။
Android One ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိတော့ပါ နှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အာမခံနေကြသည်။ ၎င်း၏ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတည်မပြုရသေးပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် BQ သည်ဤ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro အကြောင်းပိုမိုပြောပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro - Android One ပါသော BQ ဖုန်းအသစ်များ